အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအနုညာတစီရင်အရင်းအမြစ်များ - အနုညာတစီရင်သတင်းအချက်အလက်
နိုင်ငံတကာခုံသမာဓိ ကွဲပြားခြားနားသောလူမျိုးစုများ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအကြားအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်း၏ဦးဆောင်ပုံစံဖြစ်ပါသည်, အဖြစ်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်ပြည်နယ်များအကြား. ဒါဟာဖြစ်ပါသည် ကြည်ကြည်, တဘက်ဘက်မပါသော, binding, ကိုယ်ပိုင် နှင့် အတည်ပြု အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအငြင်းပွားမှုဆုံးဖြတ်ချက်နည်းလမ်းများ, ပုံမှန်အားဖြင့်အရာဖြစ်ပါသည် မြန်မြန် နှင့် ဒီထက်စျေးကြီး ပြည်တွင်းတရားရုံးတွင်တရားစွဲဆိုမှုထက်. ဒါဟာတစ်ခါတစ်ရံတစ်စပ်ပုံစံဟုခေါ်သည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်း, ဒါကြောင့်လူထုအခြေပြုဥပဒေနှင့်ဘုံဥပဒလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၏ဒြပ်စင်ရောက်ပြီးကတည်းက, အဆိုပါပါတီများကိုသူတို့အငြင်းပွားမှုပြေလည်ပါလိမ့်မည်သည့်အောက်ရှိလုပ်ထုံးလုပ်နည်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုဒီဇိုင်းအခွင့်အလမ်းကိုခွင့်ပြုနေချိန်မှာ.
ကုမ္ပဏီများမကြာခဏပင်အခြားပြည်နယ်များမှာတည်ရှိပါတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်အတူသူတို့၏ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးစာချုပ်များနိုင်ငံတကာခုံသမာဓိသဘောတူညီချက်များပါဝင်သည်, ဒီတော့အငြင်းပွားမှုပေါ်ပေါက်ပါလျှင်၎င်းတို့သည်ကြားနေခုံသမာဓိလူကြီးမတိုင်မီဆုံးဖြတ်ဖို့ထက်တစ်ဦးနိုင်ငံခြားတရားရုံးမရောက်မီတရားကိုလိုက်ပေးရနျတာဝနျရှိကွောငျး. တစ်ဦးကအတော်လေးမကြာသေးမီဖြစ်ရပ်ဆန်း, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူနှင့်ပြည်နယ်ခုံသမာဓိ နှစ်နိုင်ငံသို့မဟုတ်ဘက်ပေါင်းစုံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစာချုပ်များ၏အခြေခံပေါ်မှာပြည်ထောင်စုဆန့်ကျင်သည်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကစိုးရိမ်မှုများခုံသမာဓိတရားစွဲဆိုမှု, ခုံသမာဓိမှသဘောတူခွင့်ပြုချက်ပေးသို့မဟုတ်ပြည်တွင်းဥပဒေများ.
အသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်နိုင်ငံခြားရေးအနုညာတဆုပေးပွဲ၏အာဏာတည်ခြင်းအပေါ်ကွန်ဗင်းရှင်းဖို့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည် 1958, အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခုံသမာဓိလူကြီးများဆုအလွယ်တကူကမ္ဘာ၏နိုင်ငံလေးပုံသုံးပုံထဲမှာပြဌာန်းနိုင်ပါတယ်, ပေး ပြည်တွင်းတရားနှိုင်းယှဉ်ပါကခုံသမာဓိ၏သော့ချက်အားသာချက်ထဲကတစ်ခု အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအငြင်းပွားမှုများကိုဖြေရှင်းရန်.
ဤ website ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ, ဦးဆောင်လွတ်လပ်သောခြင်းဖြင့်ထိန်းသိမ်းထား ခုံသမာဓိဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ Aceris ဥပဒေ, ရန်ဖြစ်ပါသည် အသုံးဝင်သောခုံသမာဓိသတင်းအချက်အလက်နှင့်ဥပဒေရေးရာအရင်းအမြစ်များကိုမှဝင်ရောက်ခွင့်ပေး ပိုပြီးအလွယ်တကူမရရှိနိုင်ပါကနိုင်ငံတကာအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်း၏ဦးဆောင်ပုံစံအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ပါစေနိုင်ရန်အတွက်.
အဆိုပါ IAA ကွန်ယက်ရဲ့ ခုံသမာဓိရှာဖွေရေးအင်ဂျင် ချက်ချင်းရှာဖွေမှုများကို 67 တစ်ပြိုင်နက်တည်းအွန်လိုင်းဦးဆောင်ဦးဆောင်ခုံသမာဓိဥပဒေရေးရာအရင်းအမြစ်များကို, ခုံသမာဓိနှင့် ပတ်သက်. အားလုံးနီးပါးမေးခွန်းများပေးအဖြေတွေကို. များစွာသောအခြားအခမဲ့ခုံသမာဓိအရင်းအမြစ်များကိုထောက်ပံ့ပေးနေကြသည်, တစ်ခုတည်းသောအပါအဝင် ခုံသမာဓိကုန်ကျစရိတ်ဂဏန်းတွက်စက် ICC ကဖြေရှင်း၏အပြည့်အဝကုန်ကျနှင့်ကြာချိန်ကိုခန့်မှန်းရန်, LCIA, ICSID, ICDR နှင့် SIAC ခုံသမာဓိ, ခုံသမာဓိအပေါ်ဦးဆောင်စာအုပ်တွေတစ်မူထူးခြားတဲ့အွန်လိုင်းစာကြည့်တိုက်, အများပြည်သူဒိုမိန်းအတွက်ခုံသမာဓိ-related ဥပဒေရေးရာပစ္စည်းများထောင်ပေါင်းများစွာ၏တစ်ဒေတာဘေ့စ, အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခုံသမာဓိလူကြီးကိုရှာဖွေ tools များ, ခုံသမာဓိဝါကျရေးဆွဲအပေါ်အကြံပေးချက်များ, အနုညာတစီရင်ခြင်းနှင့်မော်ဒယ်အဖြေများများအတွက်မော်ဒယ်တောင်းဆိုချက်များ, နှင့်ပိုပြီး. ဤအရင်းအမြစ်များကိုလုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ကြောင်းနှင့်သို့စက်-ဘာသာပြန်ထားသော 40 ဘာသာစကားများ. လက်ရှိအရင်းအမြစ်များတစ်ဦးကဖော်ပြချက်ဖြစ်နိုင်သည် ဤနေရာတွင်တွေ့ရှိရ.
အဆိုပါ IAA ကွန်ယက်၏ရှေ့နေများ
အဆိုပါ အဆိုပါ IAA ကွန်ယက်၏ဦးဆောင်ခုံသမာဓိရှေ့နေများကအမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးခုံသမာဓိဥပဒေရေးရာကိုယ်စားပြုမှုမှဝင်ရောက်ခွင့်ပေး. ၎င်း၏ရှေ့နေများကလည်းခုံသမာဓိလူကြီးအဖြစ်အစေခံ.